Safal Khabar - यस वर्ष मनसुनमा औसत वर्षा हुने
आइतबार, ११ जेठ २०७७, १९ : ३३
काठमाडौं । यस वर्ष मनसुनमा मुलुकभर औसत वर्षा हुने भएको छ । दक्षिण एशियाली जलवायु दृष्टिकोण मञ्च ‘सास्कोप’ ले हालै नेपालसहित समग्र दक्षिण एशियाको मनसुन विश्लेषण गर्दा मनसुनमा मुलुभर औसत वर्षा हुने प्रक्षेपण छ ।
विश्व मौसम सङ्गठनको अगुवाइमा सास्कोपले हरेक वर्ष मनसुन शुरु हुनुभन्दा एक महिना अगावै दक्षिण एशियाली क्षेत्रको मनसुनसम्बन्धी दृष्टिकोण तयार गर्दै आएको छ । साधारणतया अङ्ग्रेजी महिनको जुन १० देखि सेप्टेम्बरसम्मका चार महिनाको अवधिलाई दक्षिण एशियाली मनसुन अवधि मानिन्छ । सो अवधिमा नेपालमा वार्षिक वर्षाको करीब ८० प्रतिशत वर्षा हुने गर्छ ।
मौसमविद् प्रतिभा मानन्धरका अनुसार मनसुन अवधिमा मुलुकभरको औसत वर्षाको मात्रा एक हजार ४९९ दशमलव ६ मिलिमिटर रहेको छ । यो भन्दा १० मिलिमिटर बढी वा कम वर्षा भए पनि औसत वर्षा नै मानिने बताइएको छ ।
यस्तै काठमाडौँको वार्षिक वर्षा एक हजार ४५४ दशमलव ८ मिलिमिटर रहेको छ । “कम वर्षा हुने भन्दैमा बाढी पहिरोजस्ता प्राकृतिक प्रकोप नहुने भन्ने हुँदैन । केही घण्टाको मुसलधारे वर्षाले ठूलो प्राकृतिक प्रकोप हुन सक्छ”, मौसमविद् मानन्धरले भन्नुभयो ।
सामान्यतया १० जुनमा पूर्वी नेपालबाट मनसुन प्रवेश गरी केही दिनमा देशभर फैलिने गर्छ । यस वर्ष नेपालमा मनसुन औसत समयभन्दा केही दिन छिटो भित्रने मौसमविद्को अनुमान रहेको छ ।
मौसम पूर्वानुमान महाशाखाको पछिल्लो विवरणअनुसार आज काठमाडौँ उपत्यकाको न्यूनतम तापक्रम १९ दशमलव शून्य डिग्री र अधिकतम तापक्रम २९ दशमलव ४ डिग्री सेल्सियस रहेको छ । आज सबैभन्दा कम जुम्लाको न्यूनतम तापक्रम ८ दशमलव शून्य डिग्री र सबैभन्दा बढी दिपायलको अधिकतम तापक्रम ३९ दशमलव ६ डिग्री सेल्सियस रहेको छ ।
नेपालमा यस वर्ष दुई दिन ढिलो गरी मनसुन भित्रिएको छ । मनसुन नेपालको पूर्वी भूभागमा...
यसवर्ष मनसुन एक साता ढिलो भित्रिने
यस वर्ष नेपालमा मनसुन एक साता ढिलो...
स्थानीय वायुको प्रभावले आज पहाडी भूभागमा आंशिकदेखि...
सामान्य वर्षात्ले उड्डयन क्षेत्र प्रभावित
सामान्य वर्षात्ले उड्डयन क्षेत्रमा सामान्य प्रभाव परेको...
१. गोरखाका एक युवकमा मृत्युपछि कोरोना संक्रमण पुष्टि
२. सांसद सरिता गिरीलाई कारबाहीका लागि सिफारिस
३. बिहीबारदेखि बाढीपहिरोको जोखिम : सतर्कता अपनाउन आग्रह
४. प्रचण्ड–ओली वार्ता सकियो, दुबैको आ–आफ्नो अडानले भएन ठोस सहमति
५. मुलुकको समृद्धिको बाधक पनि लागुऔषध : गृहमन्त्री बादल
६. इनारबाट निस्कियो ग्यास, पूजा गर्ने क्रममा सलाइ कोर्दा एक जना घाइते
७. कलेज अगाडि बोराभित्र शव फेला, प्रहरीद्वारा अनुसन्धान सुरु
८. रत्ननगरमा सोती नरसंहारको विरोध
९. जापानमा बाढीका कारण मृत्यु हुनेको संख्या ५० पुग्यो, दर्जनौं अझै बेपत्ता